बादल समूहको अलग्गै बैठक, के गर्लान् बादल ? - NepalDut NepalDut
बादल समूहको अलग्गै बैठक, के गर्लान् बादल ?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड माधव समूहका मन्त्रीहरुसँगै राजीनामा दिएनन् ।
वैध समूहबाट साबिक माओवादी केन्द्रमा आएका बादलको अहिले पनि एउटा समूह छँदै छ । राजीनामा नदिएपछि उनी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा रहेको आकलन गरिएको थियो । उनी पक्षका अधिकांश नेता भने ओलीसँग जान नहुने पक्षमा छन् ।
आइतबार बालुवाटारमै बसेको प्रचण्ड अध्यक्षताको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि बादल गएनन् भने सोमबार बिहानको ओली पक्षीय भेलामा पनि उनी देखिएनन् । उनी निकट देव गुरुङ, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरु भने ओलीको विपक्षमा छन् ।
संसद भंग गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिप्रति असहमति जनाउँदै आइतबार राजीनामा दिन बादललाई उनी समूहका नेताहरुले दबाब दिएका थिए । अहिले बादल र उनका सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी ९पथिक० मात्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बादल निकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले कता जाने भन्नेबारे आफूहरु छलफलमै रहेको जानकारी दिए । ओली पक्षमा रहेमा उनी वैशाखसम्म मन्त्री रहनेछन् ।